पोखरामा फेरी जमिन भास्सीयो, खनेर हेर्दा देखीयो यस्तो ! के हुन लाग्यो यस्तो - Enepalese.com
पोखरामा फेरी जमिन भास्सीयो, खनेर हेर्दा देखीयो यस्तो ! के हुन लाग्यो यस्तो
इनेप्लिज २०७८ असोज २ गते १६:१४ मा प्रकाशित
पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर १७ छोरे’पाटनमा गएराती परेको अ’विरल व’र्षासंगैको बा’ढीले जमीन भा’सिदा दुई घर जोखि’ममा परेका छन्। छोरे’पाटन चौतारानजिकै जमीन भा’सिदा स्थानी’य विमला बोगटी र डिल माया गुरुङको घर जो’खिममा परेका हुन् ।
हाल भा’सिएको स्था’नको १० मि’टर दु’री उ’त्तर’स्थित सडक क्षे’त्रमा करिब एक महिना अघि पनि भा’सिएको थियो । त्यतिबेला उ’क्ता स्था’नमा ग्रे’गरसाहि’त ढुंगा माटोले पु’रिएकोमा हाल सो’हि स्था’न नजिकै भा’सिएको हो ।भिडियो सहीत